PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: နွားမကွဲကြပါနဲ. ကျားဆွဲဖို.ချောင်းနေပါပြီ
ကုလသမဂ္ဂ ကို ဂရုမစိုက်လို. ကျွန်တော်တို.တိုင်းပြည် မတိုးတက်ချင်လည်းနေပါစေတော့ဗျာ။ အမျိုးဘာသာ သာသနာနဲ. ကိုယ့်ရာဇ၀င် ကိုယ့်သမိုင်းနဲ.ဒီအတိုင်းပဲနေလို.ရကြပါတယ်။ နိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ. ထမင်းကြမ်းခဲလေးစားရင်းကြေးစည်သံ တဝေေ၀နဲ.သာ နေပါရစေတော့။လူဆိုတာ တစ်နေ.သေသွားကြရမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် သူတပါးကျူးကျော်မှု စွက်ဖက်သြဇာပေးမှု အောက်မှာတော့ တိုင်းပြည်ကို မထားရစ်ကြပါနဲ.။
ဒီနေ.နံနက်စောစော RFA က AP ရဲ.သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ကိုးကားပြီး ရေးထားတာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။
" မြန်မာနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးဖို့၊ နိုင်ငံတွင်းက တခြား အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအပေါ် အကြမ်းဖက်တာတွေကို တားဆီးကာကွယ်ပေးဖို့ မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီက အင်္ဂါနေ့က အားလုံး သဘောတူ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာ ကျင်းပမယ့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာလည်း အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုမယ့်သဘော ဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းက ဖေါ်ပြပါတယ်။ " တဲ့။
တိုင်းပြည်က၀ါးမျိုဖျက်ဆီးမယ့်အရေးဟာ တဖြေးဖြေး နီးကပ်လာနေပြီလို. ခံစားရပါတယ်။ တိုင်းပြည်တွင်းမှာ အသွေးအရောင်၊ သဘောထားတွေ အမျိုးမျိုးကွဲပြားပြီး ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း မညီညွှတ်လေတော့ ဘေးကအခွင့်ကောင်း စောင့်နေတဲ့ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ကျူးကျော်ချင်သူတွေ အကြိုက်ဖြစ်လာနေတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ အခွင့်အခါစောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ ကျူးကျော်လိုသူတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ.အားနည်းချက်၊ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ. ဆင်ခြင်မှုအားနည်းချက်တွေနဲ. မညီညွတ်ကြတဲ့ သဘောထား ကွဲပြားမှုတွေအပေါ် အခြေခံပြီး သူတို.ရဲ. ကျူးကျော်စစ်ကို တစတစ တိုးမြှင့်လာခဲ့ကြတယ်။ အခုလဲ သူတို.တွေ လက်ဝါးကြီး အုပ်ထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီက နောက်တစ်ဆင့် တက်ဖို.သူတပါးနိုင်ငံရဲ. ပြည်တွငိးရေးကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း စွက်ဖက်ဖို.ကြိုးစားလာကြပြန်ပါပြီ။ တကယ်တော့ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုတာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင် နိုင်ငံပေါင်း ရာကျော်ဖွဲ.စည်းထားတဲ့ OIC ရဲ. သြဇာအောက်က အဖွဲ.ကြီးဆိုတာ ပြောစရာ မလိုတော့ပါ။
ကျွန်တော်တို. အချုပ်အခြာအာဏာနဲ. ပြည်တွင်းရေးကို စွက်ဖက် ထိပါးလာခဲ့ရင် ကုလသမဂ္ဂ မကလို. ဘာကြီးဖြစ်ဖြစ် ဂရုစိုက်နေစရာ မလိုပါ။
ကုလသမဂ္ဂ ကို ဂရုမစိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေ အများကြီးပါ။ ဥပမာ အစ္စရေးလို နိုင်ငံကို ကုလသမဂ္ဂက ဘာတွေေ ပြာနိုင်လို.လဲ နောက်ဆုံး အမေရိကန် နိုင်ငံကတောင်အစ္စရေးရဲ. သူ.နိုင်ငံသားတစ်ယောက် ထိပါးလာရင် ပြန်လက်တုန်.ပြန်တာမျိုးတွေတားဆီးလို.ရခဲ့ဘူးလို.လား။ အခုအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံလည်း အစ္စရေးနိုင်ငံလို ကျင့်သုံးနေထိုင်ရမယ့် အချိန်မျိုးဖြစ်နေပါပြီ။ သူတို.နိုင်ငံကတော့ အမျိုးသားရေး၊ တိုင်းပြည်အရေးနဲ. ပတ်သက်လာရင် အလွန် သွေးစည်းညီညွှတ်ကြတယ်။ အစိုးရရော အတိုက်အခံရော
ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံရဲ. လက်ရှိအခြေအနေအရ အစ္စရေးနိုင်ငံလို ခေါင်းဆောင်တွေအမျိုးသားရေး၊ တိုင်းပြည်အရေးနဲ. ပတ်သက်လာရင် ပြတ်သားကြဖို.၊ တဖက်နဲ.တဖက် အပြစ်ပြောနေမယ့်အစား တိုင်းပြည်နဲ.လူမျိုးအတွက် သွေးစည်းညီညွှတ်ဖို. လိုအပ်နေပါတယ်။
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူတွေရော၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရော ကိုယ့်ပြသာနာကိုယ်ရှင်းနေရင်း အလစ်ချောင်းနေတဲ့ ကျူးကျော်သူတွေရဲ. လှည့်ကွက်ထဲကိုတိုးဝင်သွားမှာ အလွန်စိုးရိမ်မိပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ. တိုင်းပြည်ရဲ.ခေါင်းဆောင်များကို နိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ.မေတ္တာ ရပ်ခံလိုပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်တွင်း မိသားစုကပြသာနာထက် ဘေးနားကအလစ်ချောင်းနေတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး ကျုးကျော်ဝါးမြိုခံရမဲ့အရေးကို အလေးထားကြပါ။
ကုလသမဂ္ဂ ကို ဂရုမစိုက်လို. ကျွန်တော်တို.တိုင်းပြည် မတိုးတက်ချင်လည်းနေပါစေတော့ဗျာ။ အမျိုးဘာသာ သာသနာနဲ. ကိုယ့်ရာဇ၀င် ကိုယ့်သမိုင်းနဲ.ဒီအတိုင်းပဲနေလို.ရကြပါတယ်။ နိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ. ထမင်းကြမ်းခဲလေး စားရင်းကြေးစည်သံ တဝေေ၀နဲ.သာ နေပါရစေတော့။လူဆိုတာ တစ်နေ.သေသွားကြရမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် သူတပါး ကျူးကျော်မှု စွက်ဖက်သြဇာပေးမှု အောက်မှာတော့ တိုင်းပြည်ကို မထားရစ်ကြပါနဲ.။
သူများလူ.အခွင့်အရေးထက် ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ. အခွင့်အရေးက အရေးကြီးပါတယ်။ သူများလူ.အခွင့်အရေးကို လိုက်နာဖို.ထက် ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေ လူ.အခွင့်အရေးမပျောက်သွားဖို. ပိုအရေးကြီး ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုသမတမြန်မာနိုင်ငံကနေ အစ္စလာမ်မစ်မြန်မာ မဖြစ်သွားဖို.အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။
( ၁၉၈၈-၁၉၉၂ ဗ.က.သ )